Ozinina Tavoahangy Perfume any Sina, Mpamatsy tavoahangy ranomanitra
Fanamboarana ambongadiny Flat Glass Sliver Spray Foana tavoahangy ditin-kazo manitra 54ml 114ml
【Miditra ao anatin'ny fonosana】: tavoahangy ranomanitra vera mazava, raha ilainao, dia ampianay 3 lasitra plastika hanampy amin'ny famenoana menaka manitra.
【CAPACITY】: Tavoahangy manitra azo namboarina.Habe portable tonga lafatra ho an'ny dia fohy, birao, miantsena, mitsidika ary fotoana hafa.
【BOTSY MISY MISY TSY MISY】: Akora fitaratra matevina, mazava sy mateza.Atomizera tsara tarehy tsara tarehy ho an'ny ditin-kazo manitra, miaraka amin'ny famafazana zavona tsara amin'ny metaly manome famafazana zavona tsara.
【FAMPIASANA VERSATILE】: Ny tavoahangy misy menaka manitra avo lenta dia azo ampiasaina amin'ny famafazana vatana, famafazana DIY an-trano, ranomanitra voajanahary, mpanadio rivotra, santionan'ny ranomanitra, fanangonana menaka manitra sy ny sisa.
【FOTOANA TSARA】: Mitady fanomezana kanto omena ny namanao na ny fianakavianao ve ianao?Ny tavoahangin'ny ranomanitra vera manara-penitra dia manana atomizer faran'izay tsara, vatana mazava, ambany matevina ary satroka mahafatifaty.Ny fianakavianao sy ny namanao dia ho tia ity tavoahangy manitra ity. Tonga lafatra amin'ny Krismasy, Thanksgiving, Taom-baovao, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fety, Fetin'ny ray, fanomezana fetin'ny reny.
32ml 53ml 102ml amboarina ambongadiny lafo vidy fonosana tsy misy famafazana tavoahangy ditin-kazo manitra kofehy amin'ny boaty
【Misy fonosana】: atomizer tavoahangy ranomanitra vera madio, raha ilainao, dia ampiana lamosina plastika 3 izahay hanampy amin'ny famenoana menaka manitra.
【CAPACITY】: Ny tavoahangy menaka manitra foana dia azo namboarina.Habe portable tonga lafatra ho an'ny dia fohy, birao, miantsena, mitsidika ary fotoana hafa.
30ml 50ml Square amber standard menaka tena ilaina fitaratra tifitra menaka manitra mainty tavoahangy misy sprayer satrony
【Miditra ao anatin'ny fonosana】: tavoahangy tavoahangy misy menaka manitra vita amin'ny vera madio, raha ilainao, dia ampiana fantsona plastika 3 izahay hanampy amin'ny famenoana menaka manitra.
Square Cosmetic Spray Parfum Bottles Matte Luxury 30ml 54ml 110ml tavoahangy manitra
【Misy fonosana】: atomizer tavoahangy ranomanitra vera madio, raha ilainao, dia ampiana 3 fantsona plastika izahay hanampy amin'ny famenoana menaka manitra.
30ml 54ml 110ml Customize ambongadiny lafo vidy fonosana tsy misy famafazana tavoahangy ditin-kazo manitra kofehy amin'ny boaty
Tavoahangy boribory mihaja PUMP SPRAYER Vary vera tsy misy rano manitra 53ml 101ml
【PACKAGE MISY】: tavoahangy ranomanitra madio tavoahangy atomizer, raha ilaina, dia hanampy 3 plastika funnels hanampy hameno ranomanitra.
【CAPACITY】: azo namboarina.Habe portable tonga lafatra ho an'ny dia fohy, birao, miantsena, mitsidika ary fotoana hafa.
Santionany maimaim-poana 30ml 50ml Spray Refillable Custom Tavoahangy Perfume amidy ambongadiny
【Misy fonosana】: Tavoahangy atomizer menaka manitra vita amin'ny vera mazava, raha ilainao, dia ampianay 3 lasitra plastika hanampy amin'ny famenoana menaka manitra.
【CAPACITY】: tavoahangin-dranomanitra Azo amboarina.Habe portable tonga lafatra ho an'ny dia fohy, birao, miantsena, mitsidika ary fotoana hafa.
【TAOVY MITSAKA MITSAKA VOALOHANY】: Fitaovana fitaratra matevina, mazava sy mateza.Atomizera tsara tarehy tsara tarehy ho an'ny ditin-kazo manitra, miaraka amin'ny famafazana zavona tsara amin'ny metaly manome famafazana zavona tsara.
【FAMPIASANA VERSATILE】: Ny tavoahangy misy menaka manitra avo lenta dia azo ampiasaina amin'ny famafazana vatana, famafazana DIY an-trano, menaka manitra voajanahary, mpanadio rivotra, santionan'ny ranomanitra, fanangonana menaka manitra sy ny sisa.
【FANOMEZANA TSARA】: Mitady fanomezana kanto omena ny namanao na ny fianakavianao ve ianao?Ny tavoahangin'ny ranomanitra vera manara-penitra dia manana atomizer faran'izay tsara, vatana mazava, ambany matevina ary satroka mahafatifaty.Ny fianakavianao sy ny namanao dia ho tia ity tavoahangy manitra ity. Tonga lafatra amin'ny Krismasy, Thanksgiving, Taom-baovao, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fety, Fetin'ny ray, fanomezana fetin'ny reny.
115ml na namboarina Square Shape Spray Empty Clear Parfum Glass Bottle with Plastic Cap
1) vita amin'ny vera avo lenta, mora raisina amin'ny endrika tsara tarehy.
2) Afaka manamboatra ny logo sy ny marika ho anao izahay raha mila izany ianao.
3) Ny siny fitaratra premium dia fomba tsara hitehirizana ny fikarakaranao manokana.
4) Ambany matevina ho an'ny fanoherana mafy.
5) Izy ireo dia habe maro hisafidianana ho anao.Tohano ny habe mahazatra, loko, sarony.
Mpamorona 35ml 47ml 50ml Decorative Elegant Premium Lady Round Shape Spray tavoahangy ranomanitra
Xuzhou Cui Can Glass Products Co., Ltddia ao amin'ny tanànan'i Xuzhou ao amin'ny faritanin'i Jiangsu, manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, famolavolana, famokarana ary fivarotana vokatra fitaratra isan-karazany, toy ny tavoahangy fitaratra kosmetika, tavoahangy fitaratra ditin-kazo manitra, tavoahangy divay fitaratra, tavoahangy champagne, tavoahangy zava-pisotro sy toaka, tavoahangy fonosana sakafo, tavoahangy fanafody sy vokatra hafa mifandraika amin'izany.
Vaovao 5ml 10ml 15ml fitaratra mihaja tavoahangy ranomanitra mangarahara
Surface fitsaboana: fanontam-pirinty ecran, sns.
Karazana famehezana: famafazana sy satroka famehezana
Fampiasana: menaka manitra
Fampiharana: tavoahangy famafazana ranomanitra
Vola: 5ml, 10ml, 15ml
Karazana tavoahangy: tavoahangy fitaratra tubular
tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy diffuser volotara, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy vera labiera, Tavoahangy Saosy Glass Bbq,